Singles Archives - Daryeel Magazine
Waa maxey sababta uu jaceylkaagii hore kuula soo xidhiidho? Muxuu qofkuu hore xidhiidh idin ka dhexeeyay mar labaad kuula soo xidhiidhaa? Maxay dad hore u wada socon jiray oo isjeclaa marar badan iskugu soo noqdaan kadib markuu xidhiidhkoodu dhamaado, maxaase sababa in dadka qaar ay dib marar kale ula soo xidhiidhaan jaceylkoodii hore kadib markey xidhiidh kale yeeshaan? Maqaalkan waxaan …
Sida Qof La Isku Jeclaysiiyo
si kasoo horjeeda sida dad badani aaminsan yihiin jaceylka waa la kaantarooli karaa. Tan macnaheedu wuxuu yahay si ula kacuc ah ayaad qof usoo jiidan kartaa, ugana dhigi kartaa mid ku jecel islamarkaana jaceyl ugu abuuri kartaa adigoo raacay islamarkaana samaynaya ficilada saxda ah ee loo baahan yahay. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa sida qof looga dhigo mid ku jecel. …
Qalbigaaga ayay jebinayaan, waxay kaaga tagayaan sabab la’aan, waxaad ka dooratay dad oo dhan, waxaad aamintay in badan, waxaad u ahayddaacad, waxaad u hurtay naftaada, waxaad u sameysay wax kasta aad awooday laakiin wax kale iyo meel kale ayaa u muuqatay mar kasta, waxaa kugu soo haray su’aalo u garaacaya maskaxdaada sida mowjado bad oo buur ku dhacaya, waxaad is …
Waxyaabaha Ugu Badan Ee Raggu Ay Ku Soo Jiitaan Dumarka
Dumarka ma waxaa soo jiitaa Ragga Quruxda Badan? Miyay ragga dhaadheeri kaga jaanis badan yihiin soo jiidashada dumarka ragga gaagaaban? Miyay ragga aan soo jiidashada lahayn fursad fiican u heli karaan inay soo jiitaan gabdhaha quruxda badan? Cilmi baadhisyo dhowaan la sameeyay ayaa lagu guulaystay in lagu ogaado in lagu ogaado waxyaabaha ugu badan ee ay dumarka badankoodu ku doorbidaan …
5 Tallaabo Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Qofka Aad Jeceshahay
Tallaabooyin aad ku soo jiidan karto qofka aad jeceshahay Sideed u soo jiidan kartaa qof aad jeceshahay? Miyuu jiraa hab kaa caawinaya inaad soo jiidato dadka? Haa wuu jiraa, maskaxda bili’aadanku waxay leedahay sharciyo maamula kuwaasi oo kantaroola habka ay u shaqaynayso. haddii aad ku guulaysato inaad si sax ah u fahanto sharciyadana waxaad awood u yeelan doontaa inaad kaantaroosho …
Sida Loo Joojiyo Jaceylka Qof Aan Ku Jeclayn
Muuqaalkan waxaan kuugu so bandhigi doonaa waxyaabaha ka hor istaaga inuu qofku joojiyo jaceylka uu u qabo qof kale iyo sida aad u joojin karto jaceylka qof aan ku jeclayn. Waxyaabaha ugu badan ee qofka ka hor istaagga inuu qof joojiyo jaceylka uu u qabo qof kale waxaa ka mid ah isagoo sameeya waxyaabahaan soo socda:
Sida Loogu Guulaysto Qalbiga Qof Aan Xiiso Kuu Hayn
Sida loogu guulaysto qalbiga qof aan xiiso kuu hayn, loona soo jiito. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi sida loo dago qalbiga qof aan xiiso kuu hayn !! Daawasho Wacan:
Jawaabtu waa WAXBA ee waxay wax wax ka qaldan yihiin dadka Jaceyl Jinni Jinni ah intuu ku dhaco ka dibna Jiljileec iyo Jirro isku rida! sii Aqri… Qof kasta wuxuu yiraahdaa Jaceyl ayaa dhaawac iga soo gaaray, laakiin taasi Run ma aha. Kelinimada, Waayida qof, Quusashada, Diidmada, Naceybka, La noolaanshaha xusuus, murugada iyo welwelka badan ayaa dhaawac keena intaana dad …
Sida Wada Sheekaysi Loola Bilaabo Wiil Ama Gabadh Aanad Garanayn
Sideed ula bilaabi kartaa wada sheekaysi qof kugu cusub oo aanad garanayn? Maxay yihiin erayada ku haboon ee ay tahay inaad tidhaahdaa? Maxayse yihiin ficilada saxda ah ee ay tahay inaad qaadaa? Muuqaalkan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa talaabooyin si heersare ah kaaga caawin doona inaad hadasho wiil, gabadh ama qof aad isku cusub tihiin. Ka faaidaysi wacan:
5 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ogaato Ka Hor Guurkaaga
5 Qodob oo ay tahay inuu qofku wax ka ogaado intaanu guursan ka hor: Baro Naftaada. Ma ogaan kartid qofka kugu habboon nolosha haddaadan aqoon qofka aad adigu tahay. Baro hiraalkaaga, ahdaaftaada nololeed, dabeecadaaha IWM. Guurku waa raaxo iyo mas’uuliyad isla socda. Mas’uuliyadduna waxay u baahan tahay in si isu dheellitiran loo wadaago. Nolosha guurku ma aha sida tan filimada …